Home Somali News Kenya: Koox hubeysan oo weerartay Jaamacada Gaarisa
Koox hubeysan oo la tuhunsan yahay inay yihiin Al Shabaab ayaa gudaha u galay xalay saqdii-dhexe xarunta Jaamacada weyn ee magaalada Gaarisa.
Dableyda hubeysan ayaa la seegay inay galeen goobaha ay ardayda seexdaan ee Garisa University College (GUC), xili ay ardayda halkaasi hurdeen, waxaana goobtaasi laga maqlayey rasaas xoogleh iyo qaraxyo.
Iska horimaad halkaasi ku dhexmaray booliiska iyo kooxa weerarka soo qaaday ayey ku dhaawacmeen askar iyo ardayda goobtaasi wax ka dhigata.
Kooxda hubeysan ayaa la sheegay in gudaha xaruntaasi ku afduubteen arday badan, sida ay sheegeen qaar kamid ah ardaydii goobtaasi kasoo baxsaday.
Ciidamada militariga iyo gaadiidka caafimaadka ee gurmadka deg dega ayaa soo gaaray xarunta Jaamacada.
Saaka oo Khamiis ah ayey warbaahinta Kenya shaaciyeen qoraal loo qeybiyey ardayda Jaamacada Nairobi oo looga digayey 25kii bishii Maarso in ay dalkaasi ka dhici karaan weeraro waaweyn oo lagu qaado xarumaha Jaamacadaha dalka Kenya.
Macada in Jaamacada Gaarisa ay kamid ahayd goobaha digniintan lasiiyey inay feejignaadaan.
Illaa iyo hada macada khasaaraha dhabta ah iyadoo weli la maqlayo rasaasta halkaasi ka dhaceysa.
Jaamacada GUC ayaa ah mida kaliya oo ku taal gobalka Waqooyi bari oo ay Soomaalidu degto, waxaana la furay sanadkii 2011, sida la sheegay waxaa dhigta arday ku dhaw 500.
Somaliland: Qaadkii Hawadayga Ahaa Ee Beeraha Oromada Ka Soo Gu’i Jiray Oo Shalay Si Rasmi Ah Gaadiid Lagu Soo Galiyay Gudaha Somaliland